भरतपुरमा भएको भाँडभैलोले अब निरन्तरता नपाओस् | चितवन पोष्ट
गृह » भरतपुरमा भएको भाँडभैलोले अब निरन्तरता नपाओस्
भरतपुरमा भएको भाँडभैलोले अब निरन्तरता नपाओस्
चुनाव भएपछि मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यजस्ता जनप्रतिनिधिहरु पाउने पक्कापक्की नै थियो, हामी भरतपुरवासीले पनि पाइयो । तर, यसपटक भरतपुरले यसका लागि धेरै नै पापड बेल्नुप¥यो । चुनावसँगै भरतपुरमा भएको राजनीतिभित्रको अराजनीतिक हर्कत अब विशुद्ध भरतपुरवासीले मात्रै नभएर राजनीतिमा थोरै पनि चासो राख्ने वा राजनीति भनेपछि परपर भाग्ने वर्गले समेत लामो समयसम्म बिर्सने छैन ।
चुनावका बेलामा मैदानमा अनेकौँ हुन्छन, तर जित्ने एउटैले हो । चुनावमा उठेपछि जित र हार हुन्छ भन्ने ज्ञान उठ्नेहरुलाई हुनैपर्छ । मैले जित्नैपर्छ भनेर चुनावमा उठिँदैन । नेपालजस्तो देशमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने झीनामसिना अनेकौँ काम नहुने हैनन् । तर, दिउँसै रात पार्ने काम अलि कम हुन्छ । योपटक भरतपुरमा दिउँसै रात पार्नेसम्मको काम भयो चुनाव जित्नका लागि । राजनीतिलाई पेसा बनाएका व्यक्तिहरुले नै त्यो काम गरे । त्यसो त, त्यो काम मध्यरातमा भएको थियो तर जुन काम भयो, त्यसले चुनावी परिणामलाई नै अर्कातर्फ मोड्यो । तमाम सम्भावनाहरुले यो चुनाव देवी ज्ञवालीले जित्दै गरेको प्रस्ट देखिएको हो । तर, अहिले भरतपुरको मेयर पदमा रेणु दाहाल छिन् । जेठ १४ गतेको मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो । मतपत्र च्यतिएपछि प्रहरीले तत्कालै दुई जना व्यक्तिहरुलाई समायो । प्रहरीले समाएका द्रोणबाबु सिवाकोटी र मधु न्यौपाने माओवादी पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । उनीहरु त्यो समयमा माओवादीको गणना प्रतिनिधिहरु बनेर मतगणना स्थलमा बसेका थिए । मतपत्र च्यातिएपछि समाइएका उनीहरुविरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको छ । एक एक लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर उनीहरु रिहा भए ।
मतपत्र च्यातेपछि केके भयो, परिणाम तपाईं हाम्रा सामुन्ने छ । चुनावमा जित–हार भएपछि जित्ने–हार्ने व्यक्तिले अनेक खालका व्याख्या, विश्लेषण, अनुमान र आँकलनहरु गर्छन् । जस–अपजसहरु लिनेदिने काम गर्छन् । तर, भरतपुरको चुनावमा सबैले भन्न सक्ने कुरा के हो भने, जेठ १४ गते मतपत्र नच्यातिई गणना सकिएको भए मेयरमा देवी ज्ञवाली नै विजयी हुने रहेछन् । मतपरिणामहरुले त्यही देखाएको छ । अब मतपत्र च्यातिनुअघि वडा नं १९ मा देवी ज्ञवालीले किन राम्रो मत ल्याए र मतपत्र च्यातिएपछि किन ल्याएनन् ? भन्ने विषयमा पनि धेरै नै जानकार भएका छन् । किनकि, यो विषयमा चर्चाहरु पनि असंख्य भएको छ ।
जेठ १४ गते मध्यरातमा भरतपुर वडा नं १९ को मतगणना हुँदै थियो । भरतपुरमा २९ वटा वडाहरु छन् । तीमध्ये २७ वटा वडाहरुको मतगणना सकेर अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । १९ पछि २० नम्बरको वडाको मतगणना सकिएपछि भरतपुरको अन्तिम परिणाम आउँथ्यो । त्यसो हुँदा भरतपुरले गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ गते मेयर पाउने लगभग निश्चित थियो । तर, वडा नं १९ को गणना नसकिँदै कसैले नसोचेको गम्भीर अपराधको घटना भयो ।
१९ को गणना अन्तिम हुँदै गर्दा जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो । गणना स्थगित भयो । त्यसपछि उठेका विवादहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै साउन २० गते वडा नं १९ मा फेरि मतदान गराइयो । त्यसपछि मतगणना हुँदा मेयरमा रेणु दाहाल प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वार देवी ज्ञवालीभन्दा २०३ मतको झीनो अन्तरले विजयी भइन् । उनलाई नेपालका महानगरपालिकामा पहिलो महिला मेयर बन्ने सौभाग्य प्राप्त भयो ।रेणुका लागि यो सौभाग्य नै थियो, किनकि वडा नं १९ को मतपत्र नच्यातिई सरासर गणना भएको भए जुन अनुपातमा मत आएको थियो त्योअनुसार मेयरमा एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीले जित्ने लगभग निश्चित नै रहेको देखियो । १९ नम्बर वडाको मतगणना सुरू नहुँदासम्म ज्ञवाली रेणु दाहालभन्दा ७८४ मतले अगाडि थिए । मतपत्र च्यातिनुअघि सो वडाको १८ सय मत गनिएको थियो ।
त्यो बेलामा मतान्तर जम्मा ७३३ मा खुम्चिएको थियो । जुन अनुपातमा दाहाल र ज्ञवालीको मत आएको थियो, वडा नं १९ को गणना सकेर २० मा जाँदा देवी माओवादी केन्द्रकी दाहालभन्दा करिब सात सय मत अन्तरले अगाडि नै रहने देखिएको थियो । तर, वडा नं १९ मा फेरि मतदान भएर गणना सकिँदा अवस्था त्यस्तो रहेन । देवी ज्ञवाली जम्मा २२१ मतले अगाडि रहे । २० को गणना सकिँदा दाहाल २०३ मतको अन्तरले विजयी भइन् । वडा नं १९ को गणना सकिँदा दाहालभन्दा ज्ञवाली ४२५ मतमात्रैले अगाडि भएको भए पनि ज्ञवाली नै विजयी हुने रहेछन् । मतपत्र नच्यातिएको भए ज्ञवाली योभन्दा पक्कै पनि धेरै मतले अगाडि आउने थिए । तर, फेरि निर्वाचन गराउँदा नतिजा अर्कै आयो ।
कांग्रेसका मतदाताले रेणुलाई मत नहालेको स्पष्टै थियो । गणना हुन बाँकी रहेका वडा नं १९ र २० कांग्रेसका गढका रुपमा परिचित थिए । वडा नं १९ मा कांग्रेसका मतदाता धेरै रहे पनि मत रेणुलाईभन्दा देवी ज्ञवालीलाई राम्रो आएको थियो । यस्तो बेलामा मतपत्र च्यातिए कानुनअनुसार पुनः मतदान गराउनु पर्ने अवस्था थियो । फेरि मतदान गराए रेणुका पक्षमा पहिला मतदान नगरेका कांग्रेस समर्थक मतदाताहरुलाई मनाउन सकिन्छ र रेणुलाई मत दिन लगाएर जिताउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ माओवादीले मतपत्र च्यातेको एमालेले सुरूदेखि नै आरोप लगाउँदै आएको थियो । फेरि मतदान भएपछि आएको नतिजाले यसमा सत्यता थियो भन्ने आँकलन गर्न सजिलो भएको छ ।
तर, रेणु निर्वाचित भएको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि रहे पनि प्रक्रियाप्रति कसैले चुनौती दिन मिल्ने ठाउँ छैन । मतपत्र च्यातिएपछि मतदान होइन, मतगणना नै हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर एमाले सर्वोच्च अदालतसम्म गयो । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि मतदानकै पक्षमा निर्णय दियो । मतपरिणाम पनि एमालेको पक्षमा आएन, तर विषयवस्तु अब सजिलै ओझेल नपर्ला भन्ने शंका सर्वसाधारणको मनमा छ । किनकि, चुनाव सकिएपछि भरतपुरका जनप्रतिनिधिहरुले सपथ पनि अलग अलग लिए । संकेत राम्रो छैन भन्ने भावना भरतपुरवासीमा छ ।
भरतपुर अब कसरी अगाडि बढ्ला ? मतदाताहरु धेरैलाई लाग्छ, ‘अहिले देवीलाई अन्याय भएकै छ ।’ यो अन्याय न्यायमा कसरी बदलिने हो, यसै भन्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ, यो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने छूट एमालेलाई छ । तर, यही विषयले भरतपुरको विकास अवरूद्ध हुनुहुँदैन ।
भरतपुरवासीहरु जे भयो भयो त्योभन्दा बढी नराम्रो नहोस् भन्ने चाहन्छन् । अन्यायमा परेको एमालेले आक्रामक बनेर आउँदा यहाँको विकास प्रभावित पो हुने हो कि ? भन्ने संशय मतदातामा छ । किनकि, अहिलेसम्मको नतिजालाई आधार मान्दा एमालेले धेरै वडा जितेर आफूलाई प्रभावशाली सावित गरेको छ । एमालेले जितेका दुईवटा वडाका वडाध्यक्षलाई अदालतले सपथ लिन रोकेको छ, नभए भरतपुरमा एमाले नै वडाध्यक्षमा अग्रपंक्तिमा छ ।
यस्तो अवस्थामा रहेको एमालेले प्रतिस्पर्धी दलका मेयर÷उपमेयरहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ला भन्ने चासो छ । पक्कै पनि असहयोग नै गर्ला र असफल नै बनाउन खोज्ला भन्ने स्वाभाविक उत्तर मतदाताहरुसँग छ । यसो भएमा भरतपुरको विकास के होला ? भन्ने चिन्ता पनि छ । भरतपुरमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो, चुनावसँगै यो सकिने छाँट छैन । बरू, लामो समयसम्म जाने अवस्था छ । यस्तो बेलामा एमालेले कस्तो रणनीति अपनाउला भन्ने चासो पनि मतदातालाई छ ।
भरतपुरमा जे भयो त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा देवी ज्ञवालीले हारे र उनलाई अन्याय पनि भयो । तर, ज्ञवालीको नैतिक जित भइसक्यो । राजनीतिक रुपमा एमाले माथि परेको अवस्था छ । त्यसैले, भरतपुरको विषयलाई एमालेले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । आफूमाथि परेको अन्यायको बदला लिँदा भरतपुरको विकास नरोकियोस् भनेर सोच्ने अब एमालेले नै हो । मतदाताको साहानुभूतिलाई राजनीतिक पुँजी बनाएर अगाडि बढ्ने कि, भएको साहानुभूति पनि गुमाउने ? भन्ने विषय एमालेको भूमिकाले तय गर्ने छ । किनकि, अब पनि एमालेले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गल्ती गर्नेलाई माफ देऊ, तर उसको गल्ती नबिर्स भन्ने सिद्धान्त छ । अब एमालेले गल्ती गर्नेहरुलाई माफ दिनैपर्छ, तर गल्तीलाई बिर्सन पनि हुँदैन । भरतपुरका लागि आउने हर योजना असफल बनाए रेणु असफल हुनेछिन् भन्ने सोच एमालेले राख्ने छैन । रेणुले गर्ने कमजोरीको खबरदारी र उपयुक्त योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नीति लिएर अगाडि बढे एमालेलाई जिम्मेवार दलका रुपमा मतदाताले लिनेछन् ।
हिजो भरतपुर धमिलो बन्यो, चुनावी परिणाम नै उताको उता भयो । अब भने भरतपुर सङ्लिन पर्छ । धमिलो भएको भरतपुरलाई धमिलो बनाए सास्ती सबैले पाउने हुन् । राजनीतिक रुपमा धमिलो भएको भरतपुरलाई अब कसले सङ्ल्याउँछ ? भनेर मतदाताले उत्सकुतापूर्वक हेरेको अवस्था छ । जनताको नजरमा राम्रो हुने अवसर पार्टीहरुलाई छ ।
भरतपुर मतपत्र काण्ड : देवी ज्ञवाली र दैत्य दौँतरी द्वन्द्व